!!! #update #7/11 #FUNERAL #KPG #Nay #Myo #Zin ရွှေဝါချောင်သို့စတင်ထွက်ခွာပါပြီ #BODY #KO #PAR #GYI #EXHUMED | democracy for burma
!!! #update #7/11 #FUNERAL #KPG #Nay #Myo #Zin ရွှေဝါချောင်သို့စတင်ထွက်ခွာပါပြီ #BODY #KO #PAR #GYI #EXHUMED
tags: ကိုပါကြီး မြုပ်နှံထားရာသို့, ယခုဆေးရုံရှေ့, သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ, ရွှဝါချောင်သို့စတင်ထွက်ခွာပါပြီ, BODY FOUND, Burma, CLIPS, CRIME, EXHUMED, Funeral, Justice, KILLED JOURNALIST, Ko Par Gyi, Ma Thandar, Myanmar, Nay Myo Zin, tortured, Video
RIP KO PAR GYI
PHOTO CREDIT Aung Gyi Dvb
SUPPORT MA THANDAR, WIFE OF KO PAR GYI : NAY MYO ZIN- South dagon KBZ bank acc.0681210009700
NAY MYO ZIN MSDO
ကွယ်လွန်သူကိုပါကြီး၏ မိသားစုနှင့်အတူထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ်။ ko ko gyi
Credit : ထင် လင်း ဦး
ကိုပါကြီး ဈာ ပန မှ သူ့ရဲဘော် များ မိတ်ဆွေ များရဲ့ လွမ်းသူ့ ပန်းခြင်းများ
ဒီ နေ့ ရေဝေး မှမြင်ကွင်း ၊၄း၁၅ ၊
ကိုပါကြီး ရုပ်‌ကလပ်‌ ‌ရေ‌ဝေးသုသာန်‌သို့‌ရောက်‌ရှိလာပါပြီ
ကိုပါကြီး၏ ရုပ်အလောင်း ထားရှိရာ ရေဝေးသုသာန် ခန်းမ ( ၁/ ခ )
(မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နာရီ) cr.Ant Bwe Kyaw
ကိုပါကြီး နောက်ဆုံး ခရီး cr.Ba Thet Aung ကိုပါကြီးရုပ်အလောင်းရေ
ဝေးသို့ ယခု ၁ နာရီ ၃၀ အချိန်ရောက်ရှိ။
ကိုပါကြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အနားယူလိုက်ပါတော့..
သူ့သား ကိုပါကြီး အတွက် အန်တီ ပေးတဲ့ လွမ်းသူ့ ပန်းခြင်း ရောက်နေပါပြီး.
ကိုပါကြီး အလောင်းအား ယနေ့ ညနေ ၅နာရီ အချိန်တွင်
ရေဝေး သုသာန် ခန်းမ ၁ တွင် သဂြိုလ် မည်ဟု စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်း ထပ်မံ ရရှိပါသည်..။
တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေ ပြည်သူတွေ အားလုံးအကူအညီနဲ. ရုပ်အလောင်းကို
ကိုပါကြီး အလောင်း ရန်ကုန်သို့ သယ်ယူရာတွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစီးများမှ လုံခြုံရေးအတွက် အကူအညီ လုံးဝမပေးနိုင်
ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည့်အတွက် မိသားစု အစီအစဉ်ဖြစ်သာ သယ်ယူ
သယ်ယူရာတွင် လမ်းခရီးတွင် အနှောက်အရှက် တစ်စုံတရာ မပေါက်စေရန်
အတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြမည့် အဖွဲ့များမှာ –
(၁) မွန် အမျိုးသားပါတီ(MNP)
(၂) NLD မွန်ပြည်နယ်
(၃) မွန် လူငယ် ကွန်ရပ်
(၄) ပအို လူငယ်ကွန်ရပ်
(၅) နာရေးကူညီမှု အသင်း
(၆) အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစီးများ
(၇) ဒေသခံပြည်သူများမှ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် ပါဝင် လိုက်ပါကူညီ ပို့ဆောင်ေ
အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို လုံခြုံရေးအရ ဖော်ပြပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသည့်
(06 Nov 2014) 5:50 Pm
သတင်းဓါတ်ပုံ- ကိုသူ via Kyaw Swar Myint
နာရေးကူညီမှု(ရန်ကုန်) အသင်းကား မော်လမြိုင်ဆေးရုံရင်ခွဲရုံရှေ့ရောက်ရှိလာပါပြီ
Credit : Ko Kyaw Khant
ရန်ကုန် ရေဝေးသုသာန်တွင် သဂြိူလ်ခွင့် သချိုင်းလက်မှတ်ရပါပြီ
သတင်းဓါတ်ပုံ- ကိုကျော်ခန်. Ko Kyaw Khant via Kyaw Swar Myint
မော်လမြိုင်ဆေးရုံရင်ခွဲရုံရှေ့တွင် ကိုပါကြီးအလောင်းကို စစ်ဆေးသူ မှုခင်းဆရာဝန်နှင့်မသန္တာတွေဆုံ
ကိုပါကြီးသတင်းကိစ္စဖွခြင်းရင် မိမိရဲ့ ပရိုဖိုင်းပုံအစစ်အမှန် ပြပြီးဖွကြပါ၊၊
ဘာလို့ ငါတို့ ခေါင်းဆောင် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံနဲ့ သတင်းဖွနေကြတာလဲ၊၊
၆.၁၁.၂၀၁၄ နံနက်(၉:၃၀)အချိန်၊မော်လမြိုင်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ ကိုပါကြီးဇနီး မသန္တာ အတွက် ငွေ(၅)သောင်းကျပ်ကို ဒေါ်နော်အုံးလှထံပေးအပ်ခဲ့ပါသည်၊၊
ကိုပါကြီးဇနီးမသန္တာ မော်လမြိုင်ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံ ရှေ့တွင်တွေ့ရစဉ် Ko Kyaw Khant 6./11/2014
ကိုပါကြီး၏ ဘော်ဒီအား တူးဖေါ်ခြင်း အသေးစိတ် မှတ်တမ်း။ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစု အတွက် ထိခိုက်နစ်နာစေလိုခြင်း အလျင်း မရှိပါကြောင်း နှင့် တောင်းပန်ရင်း မှတ်တမ်းအား ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါရန် တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။
ကိုပါကြီးအား သတ်ဖြတ်လိုက်သည့် အဖွဲ့အစည်းက စနစ်တကျ မြုပ်နှံသဂြိုဟ် ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို ပေါ်လွင်စေခြင်း၊ ရုပ်အလောင်းတွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရထားသည့် အခြေအနေများကို ပြည်သူလူထုက သိရှိထားပြီး ထုရိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းလော။ သေနက် ဒါဏ်ရာလော။ မကြာမှီ ဆေးမှုခင်းဆရာဝန်ထံမှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ဆေးစစ်ချက် အဖြေ အပေါ် အကဲဖြတ် စေနိုင်ပါရန် အတွက်သာ ရည်ရွယ် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း
မြုပ်နှံထားရာ နေရာသို့ အသွား
၅.၁၁.၂၀၁၄ ည(၇)နာ၇ီအချိန်၊မော်လမြိုင်ဆေးရုံ၊ခန်းမဆောင်တွင်ကိုပါကြီးအလောင်း မစစ်ဆေးခင် စစ်ဆေးရာတွင် တာဝန်ရှိသော မှုခင်းဆရာဝန်၊ဆေးရုံအုပ်ကြီး၊တရားရေးရာတစ်ဦး၊ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကိုပါကြီးဇနီး မသန္တာတို့အဖွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊၊ cr. Ko Kyaw Khant
KO PAR GYI PHOTO CR. Han Pa
photo cr. Ko Kyaw Khant
Aung San Thway T
photo credit Ko NAY MYO ZIN
မော်လမြိုင် ဟင်္သာ အ၀ိုင်း ဆုံရပ်တွင် ယာဉ်များစောင့်ဆိုင်းနေကြပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အမှုမှန်ဖေါ်ထုတ်ရေး အဖွဲ့များ နှင့်အတူ မနက်၈နာရီ တွင် ကိုပါကြီး အား မြုပ်နှံထားရာ နေရာသို့ ၂နာရီခွဲခန့် လမ်းကြမ်းများအတိုင်း သွားရောက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျိုက်မရော ရွှေဝါချောင် ရှိ ကိုပါကြီးအား မြုပ်နှံထားရာ နေရာသို့မသွားမီ……….
ထိုနေရာတွင် မည်သည့် ဖုန်းလိုင်းမှ မမိသောကြောင့် တွေ့ရှိမှုများကို မော်လမြိုင်သို့ပြန်ရောက်မှ တင်ပြပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
← #ด่วน!! #CRIME #เกิดเหตุยิงที่ #โรงพยาบาล #หัวเฉียว #เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
#MYANMAR #BURMA #Killed #Journalist #Par #Gyi’s #body #exhumed →